War Saxaafadeedkii Talyaaniga iyo Kiplagat.
war saxaafadeed shalay kasoo baxay wasaaradda arimaha dibadda ee dalka kenya ayaa lagu sheegay in kulan ay wada yeesheen wasiir ku xigeebka arimaha dibadda ee talyaaniga Al Faredo Mauthica iyo ergayga kenya u xil saartay arimaha soomaaliya Bethwell Kiplagat.
Kiplagat ayaa uga mahadceliyay doowrka talyaanigu ay ku leeyihiin shirka iyo kaalmadda guud ahaan midawga reer yurub uu u fidinayo shirka nabadaynta soomaaliyeed ee magaaladda Eldoret. wasiir ku xigeenka talyaaniga Al faredo Mauthica ayaa isagana sheegay in ay dawladiisu soo dhowaysay markii lamagacaabay ergayga Cusub ee kiplagat.
waxaa kulankaas ku weheliyay safiirka talyaaniga u fadhiya Kenya Carlo Calia iyo ergayga dawladda talyaaniga ugu xil saaran soomaaliya Carlo Ungaro.
Warku waxaa intaas uu ku darayaa in shirkii 6dii bishan ay Nairobi ku yeesheen Igad lagu soo hadal qaaday qaabka shirka loosii wadi lahaa marka dhowaan loosoo wareejiyo magaaladda Nairobi iyo sidii dawlad looga dhisi lahaa shirka Nabadaynta, inkastoo mas'uuliyiinta IGAD ay xooga saareen heshiiskii dhexmaray Mucaaradka Sudan ee SPLA iyo Dawladda Al Bashiir oo kala saxiixday awood qaybsi iyo wada noolaansho.
shalay aroortii oo aan la xiriiray Mas'uul ka tirtsan wasaaradda arimaha dibadda Kenya waxaa uu iisheegay in wixii ka danbeeya 15ka bishan shirka loosoo wareejinayo deegaanka Mbagathi oo ka tirsan Nairobi.